Nagarik News - को जाओस् पार्टी कार्यालय?
सरकारमा पुगेपछि पार्टी र जनताबीचको दूरी बढ्ने भन्दै कार्यालयले मन्त्रीहरूलाई नियमित कार्यालय आउने 'सेड्युल'सहित भेटघाटका लागि कोठाको नै व्यवस्था गरेको थियो। तर, कार्यालय जाने को? मन्त्रीहरू कार्यालय जान छाडेपछि मन्त्रीले कार्यकर्ता भेटका लागि बनाएको कोठामा कार्यालय सुरक्षाका लागि पुगेका सशस्त्र प्रहरीका अधिकारीहरू सुतिरहेका भेटिन्छन् भने कार्यालय सुनसान छ।
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी सभापति सुशील कोइराला उपत्यकाबाहिर चौतारा उद्घाटन गर्न समेत जान भ्याए पनि उनलाई कार्यालय जाने फुर्सद भने छैन। केन्द्रीय सदस्यहरूले विरोध जनाए पनि कोइरालाले हाँसेर उडाइदिने गरेका छन्। प्रधानमन्त्री र मन्त्री मात्र होइनन्, पार्टीका पदाधिकारी र नेता पनि कमै पुग्छन्। बल्लतल्ल बसेको केन्द्रीय समितिको बैठक पनि प्रधानमन्त्री निवासमा नै बसेको छ। त्यो पनि चारपटकको स्थगनपछि। पार्टी कार्यालयमा बैठक नबसेर बालुवाटारमा राखेकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै केन्द्रीय सदस्य प्रकाशशरण महतले पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएका बेला प्रधानमन्त्री निवासमा नै बैठक राख्ने निर्णय गर्न प्रस्तावै गरेका छन्। बैठकले पार्टीको १३ औँ महाधिवेशन भदौ २४ बाट काठमाडौँमा गर्ने निर्णय गरेको छ।
सम्झना लामिछाने मगर उदाउँदी लोकगायिका हुन्। उनको स्वरमा रहेका ‘घरमा पराल बारीमा बन्सो', ‘फूल फुलेर पयाँलै भयो' जस्ता गीत चर्चित छन्। नृत्यमा पनि रुचि भएकी उनी मोडलिङ पनि गर्छिन्। केही...